केटाहरु केटीको कुन बानी मन पराउँछन् थाहा छ ? (पढ्नुस् पुरा)-Nagarikaawaj.com
केटाहरु केटीको कुन बानी मन पराउँछन् थाहा छ ? (पढ्नुस् पुरा)
बिहिबार, पुस २५, २०७०
कसैलाई उनको हेराई राम्रो लाग्ला, कसैलाई उनको फिगर राम्रो लाग्ला अथवा विभीन्न कुराहरु राम्रो लाग्ला । यस्तै उसले गर्ने केही क्रियाकलाप पनि राम्रो लाग्ला । अनि धेरैजसो केटीहरु यो लाग्छकी केटाहरु केटीहरुको फिगर मन पर्छ । केटीहरु सोच्छन् सबभन्दा पहिला केटाहरुले आफ्नो शरिरलाई हेर्छन र त्यसलाई नै मन पराउँछन । तर, ठ्याक्कै यो साँचो हैन् । केटाहरु केटीको अन्य आनीबानी मन पराउँछन केटीको शशिरलाई हैन् । अमेरिकाका युर्निभसिटी अफ नेब्रास्का– लिनकाँल्नका शोधकर्ताहरुले गरेको एक अध्ययनमा केटाहरु, केटीको फिगर मात्र देखेर आकर्षित हुदैनन् । केटाहरुले केटीको निम्न कुरा देखेर केटाहरु मन पराउँछन् । पुरा पढ्नुहोस् ।
चकचके बानी :– केटीहरु चकचके बानीको केटाहरु खुबै ध्यान दिन्छन् । केटाहरुलाई केटीको यस बानीले पनि आक्रशित गरेको हुन्छ । जो आफ्नो साथीका साथ घुम्ने, एक्लै रहने केटीभन्दा मोजमस्ती गर्ने केटी खुब मन पर्छ । सवैलाई भन्न नसकिएपनि कतिपय केटाहरु चाहि लिमीटमा रहेर चक चक गर्ने केटीहरको वानी चाहि खुवै मन पर्छ ।
मुस्कराउने स्वाभाव :– केटीहरु मुस्कुराउने बानी छ भने केटाहरु खुब मन पराउँछन् । अलि हाँसी मजाक गर्ने केटी पाए केटाहरु झन खुब मनपराउँछन् ।
सेक्सी लुक :– सेक्सी तबसम्म ठिक मान्छन केटाहरु धेरै अश्लिलता हुदैनन् । केटीहरुले धेरै भड्किला कपडा नलगाएका र प्रचलित मान्यता बिपरित रहेका केटीहरुलाई केटाहरु मन पराउँदैनन् ।
हेयर स्टायल : – कयौं केटाहरु ध्यान केटीको तौल र फिगरमा जादैन् । त्यसो हुदाँ केटीको राम्रो हेयर स्टाइललाई केटाहरुले मन पराउँछन् ।
आत्मबिश्वास : – केटाहरु यस्ती केटी मन पराउँछन जसले आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रणमा राख्नसक्छ । दिलबाट नै बलियो आत्मबिश्वास भएकी केटीलाई केटाहरु मन पराउँछन् । केही सेक्सी, केही आकर्षक खालकी अथवा विभीन्न कुराले केटाहरुलाई आकर्षक गर्ने भन्दा आत्मविश्वास वढि भएकी केटीप्रति अधिकासं केटाहरुको ध्यान जाने गर्छ ।